Soo saaraha iyo Warshada ugu Fiican Taxanaha HCQ Calcium Hydroxide Slaking System |HongCheng
Nidaamka slaking kaalshiyam hydroxide taxanaha HCQ waxa loo isticmaalaa in lagu soo saaro heerka warshadaha calcium hydroxide.Calcium hydroxide waa unug aan organic ahayn, caanaha kiimikaad waa Ca (OH) 2, oo sidoo kale loo yaqaan lime lallabo ama lime fuuqbax leh.Oo ay ku jirto heerka warshadaha calcium hydroxide iyo heerka daahan calcium hydroxide (budada kaalshiyamka ash).Calcium hydroxide: formula kelli waa Ca (OH) 2, qaraabo miisaanka kelli waa 74, barta dhalaali waa 580℃(1076℉), PH qiimaha≥12, alkaline adag, budo cad cad, wax yar ku milmay biyaha, milmi acid glycerin iyo ammonium chloride, waxay sii deyn doontaa kulayl badan oo aashitada ah, cufnaanta qaraabada waa 2.24.Biyaha la caddeeyey waa alkaline iyo hufan, aan midab iyo ur lahayn, si tartiib tartiib ah ayaa loo nuugi doonaa oo waxay u beddeli doonaan kaalshiyam carbonate hawada.Calcium hydroxide waxaa inta badan loo isticmaalaa daaweynta bulaacada deegaanka saaxiibtinimo, qaboojinta dhoobada, desulfurization gaaska flue, maqaarka maqaarka, qalabka dhismaha, lacquering, metallurgy non-ferrous, feed dheeri ah, dufan calcium ku salaysan, midabada, qaboojiyaha, iyo iwm. Haddii aad u baahan tahay. Taxanaha HCQ Kaalshiyam Hydroxide Slaking System, fadlan guji LAXIRIIR HADDA hoose.
Wax soo saarka Kaalshiyam Hydroxide ee darajada Warshadaha
Heerka wershadaha ee kalsiyum hydroxide ee ay soo saarto nidaamka nidaamka slaking HCQ ayaa leh isticmaalka awood ka hooseeya qalabka la isku daray.Isticmaalka korontada ee soo saarista kaalshiyam hydroxide waa 18-23 kw / ton (ku salaysan waxa ka kooban calcium oxide la heli karo).
Heerka tayada Calcium Hydroxide
Calcium hydroxide waxay fulisaa heerka HGT4120-2009 Kaalshiyam Hydroxide warshadeed.
Budada kaalshiyamka dambaska ah waxay fulisaa heerka daahan dambaska kaalshiyamka budada ah heerka -001-2016.
Xulashada Walxaha ceeriin ee Kaalshiyam Hydroxide-soo-saarka
lime Metallurgical laguma talinayo farsamaynta qoto dheer, lime for soo saarka calcium hydroxide iyo ash-calcium budada ah waa in ay buuxiyaan shuruudaha processing qoto dheer.Waxaa la soo jeediyay in la isticmaalo kalsiyum oxide ee la heli karo ee ka sarreeya 90% wax soo saarka kalsiyum hydroxide, iyo caddaanka lime ee wax soo saarka budada calcium cawl waa in ay ahaataa mid tayo sare leh.
Hababka kala duwan ee habaynta ayaa diyaar ah: 1. Koontaroolka gacanta
Saamaynta ururinta siigada
Nidaamka ka saarista boodhka laba-geesoodka ah ee bacda garaaca garaaca wadnaha iyo ka saarida boodhka biyaha.Waxtarka ka-saarista siigada waxay gaari kartaa ≤5mg/m³, taas oo u wanaagsan deegaanka.
Waxay leedahay shaqada pre-slaker, kaas oo ilaalin kara heerkul sare oo joogto ah oo loogu talagalay dhirbaaxada, waxayna qaadataa raad yar, mugga weyn iyo dhererka waxtarka leh ee ka dheer qalabka guriga ee la midka ah, waxtarka sare ee hufnaanta.
1.The pre-slaking daab qaata duurka u adkaysta alloy saari karo waayo, xidhashada muddada dheer iska caabin ah iyo fududaynta beddelka.
2.The optimized hal usheeda dhexe saamaynta kala firdhiso labiska sida usheeda dhexe dual, yaraynaysaa fursada dual usheeda dhexe jabin garbaha iyo ulo.
3. Looma baahna nadiifinta gacanta sababtoo ah koronto go'an ama xirid aan caadi ahayn, taas oo hagaajinaysa jawiga goobta, mishiinka ayaa dib loo bilaabi karaa.
1. Waxa ay kordhin kartaa heerka firidhsan ee calcium hydroxide.2. Yaraynta heerkulka kalsiyum hydroxide alaabta kama dambaysta ah.
Biyo kulul oo si degdeg ah loo daadiyo
Isticmaalka kulaylka si aad u kululeyso heerkulka biyaha nidaamka ilaa 80 ℃ 5 daqiiqo gudaheed, taas oo kordhisa xawaaraha dhuuqista iyo heerka wax shiididda.
Dhererka dhirbaaxada oo dhan waa 35-40 mitir, taas oo qaadanaysa 100 daqiiqo in si fiican loo jaro.
Astaamaha Qalabka Kaalshiyam Hydroxide
Mashruuca HC Calcium Hydroxide Qalabka Gaarka ah
Nidaamka qaybinta biyaha Nidaamka qaybinta biyaha ee caqliga leh Awood Wax soo saar sare, ilaa 30t/h unugkiiba
Dheecaan dharbaaxo ah Slag waa la sii dayn karaa si loo hagaajiyo daahirsanaanta kalsiyum hydroxide ka dib dharbaaxada Awood
iyo isticmaalka tamarta 1. awoodda rakiban hoose halkii cutub2.Isticmaalka tamarta hoose halkii ton
Ururinta boodhka ah Nidaam ururinta boodhka laba-geesoodka ah ee shaandhada boorsada Jet-ka iyo ururiyaha boodhka buufinta biyaha oo leh hufnaan caadi ah Wanaag Wanaag la hagaajin karo inta u dhaxaysa 80 mesh - 600 mesh, qaybinta cabbirka walxaha lebbiska ah
Habka-slaking ka-hor Habka-slaking ka-hor wuxuu isticmaalaa walxo u adkeysta dahaadhka isticmaalka muddada dheer Dheecaan dharbaaxo ah Si sax ah u daadinta dheecaanka si waafaqsan shuruudaha macaamiisha
nidaamka Heerkulka joogtada ah iyo si buuxda u gariiraya, aag aan deganayn, dherer wax ku ool ah oo dheer, si buuxda u gariiraya Aagga sagxada aag kasta oo aan deganayn cutubkiiba
Hawlgal aan cidina wadin Kontoroolka tooska ah ee PLC si loo xoojiyo awoodda xakamaynta tayada Waxqabad la isku halayn karo Gariir hooseeya, buuq yar, hawlgal xasilloon iyo waxqabadka lagu kalsoonaan karo ee mashiinka
Biyo kulul oo la dhuuqo Dambaska biyaha kulul ee degdega ah waxay soo dadajin karaan dhuuqista iyo heerka wax-shiidka Ilaalinta deegaanka Nidaamka xidhidhiyaha oo dhan ayaa asal ahaan xaqiiqsaday aqoon-is-weydaarsiga bilaa boodhka ah
Isbarbardhigga Qalabka HC Calcium Hydroxide iyo soo saarayaasha kale
Soo saarayaasha kale
Hababka qaabeynta ee kala duwan
Gacan ku haynta
Habka kontoroolka laba-geesoodka ah: buug-gacmeed + otomaatig ah
Nidaamka qaybinta biyaha ee caqliga leh
qaabeynta kali ah
Saamaynta ururinta boodhka labanlaaban
Bacda Jet-ka shaandhada boodhka ururiyaha iyo boodhka biyaha ururiyaha
Waxtarka ururinta siigada ≤5mg/m3 Booska shaandhada bacda jet ≥100mg/m3
Daabka hore-slaking-ku waxay qabataa duurka u adkaysta dabaylaha daawaha ee la saari karo ee isticmaalka muddada dheer iyo beddelka fudud.
2. Adeegso qase hal-shaft si aad u gaadho saamaynta kala firdhisanaanta labiska ee isku-darka labajibbaaran si ay u yarayso itimaalka usheeda dhexe ee jaban qasiyaha labajibbaaran.
3. Haddii ay dhacdo koronto la'aan ama xirid aan caadi ahayn, waxaad bilaabi kartaa qalabka mar kale iyadoo aan loo baahnayn in lagu nadiifiyo gacanta. 1. Xirashada daabku waxay u baahan tahay alxanka gacanta oo u baahan dayactir culus.2.Usheeda labanlaabantay waxay leedahay suurtogalnimada daab jaban oo daab jabay.3.Haddii ay dhacdo koronto go'an ama xirid aan caadi ahayn, nadiifinta gacanta ayaa loo baahan yahay ka hor inta aan dib loo bilaabin mar kale.
Iyada oo la shaqeynayo hore-slaking, waxay ilaalisaa heerkul sare oo joogto ah oo loogu talagalay dhirbaaxada, aagga aan deganayn, iyo mugga in ka badan 10% ka weyn qalabka asxaabta.Dhererka waxtarka leh ayaa ka badan 50% ka dheer qalabka asaagga, dharbaaxo ku filan. 1.Dheer gaaban2.Mug yar
1. Kordhi heerka shiidka calcium hydroxide.2.Yaree heerkulka calcium hydroxide. Kaliya qayb ka mid ah, ma jiro homogenizer
Adigoo ka faa'iidaysanaya kulaylka, heerkulka biyaha ee nidaamka waxaa lagu kululeeyaa ilaa 80 ° C 5 daqiiqo gudahood, taas oo kordhisa xawaaraha hoos u dhaca iyo heerka firirka. Qalab dharbaaxo caadi ah
Dhererka dhirbaaxadu waa qiyaastii 35-40 mitir, waxayna qaadataa 100 daqiiqo, si fiican u jilicsan. Dhererka dhirbaaxadu waa qiyaastii 12-18 mitir, waxayna qaadataa 40 daqiiqo, dharbaaxadu si fiican maaha.
Ultra Fine Mill Batroolka Coke Roller Mill Warshadda Rinjiga Rinjiga Burada Ka Soo Qaada Shiineeska Qiimaha Mashiinnada Milling Dhaqdhaqaaqa Fiican ee Ultra Furimaha Dagaalka